Sida loo kala saaro Microstation Geographics - Geofumadas
Mee, 2010 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Inaan lumino xawaaraha, in ka badan Alzheimer ayaa marwalba ina ogolaada, halkan waxaan kaa tagayaa qayb ka mid ah wada-xaajoodka bilaashka ah ee aan siiyay qaar ka mid ah guysada Mexico, kuwaas oo isticmaalaya isticmaalka Juquraafi.
Waxay leedahay khariidad, oo ay ku jiraan afar qaybood, ka dibna qayb kasta wuxuu leeyahay xuduudaha iyo centroids. The centroid leedahay link Diiwaanka xogta, miiska tufaaxa, iyo sidoo kale ku jira magaca qaybta qaybta Cve_Sec.
Sidaa daraadeed kiiskan, waxaan rabaa in aan mulkiilaha u kala saaro, kuna saleysan lambarka qaybta. Waxaan caddaynayaa arrintan marka hore, sababtoo ah waxay ahayd lagama maarmaan maxaa yeelay xiriirka xogta waxay ka timid qolalka hoose iyo maahan muuqaalo.
Samee qaabab. Haddii aan la arki karin, waxaannu ka shaqeynaa aaladda juqraafi ahaan, ee ku jira menuka Qalabka> Juquraafi> Juquraafi. Si loo abuuro qaababka, waxaan u deyneynaa heerarka oo dhan, oo kaliya heerka heerka tufaaxa iyo centroids, waxaan sameynaa a deedka oo waxaan dooranaa icon la yiraahdo Samee qaabab.
Heerka bilaashka ah waxaa loo baahan yahay meesha shaxanka la keydin doono.
Kala xiriirida qaababka. Taas awgeed, waxaan u jeesannaa heerka xuduudaha tufaaxa, oo kaliya ka tago heerka qaababka iyo centroids. Waxaan samaynaa a deedka waxaana dooraneynaa nambarka afaraad ee loo yaqaan ' Isku xirnaanta xiriirka, tilmaamaya Centroid -> Shape oo guji shaashadda.
Dib u eeg xiriiryada. Calaamadda ah in wax kasta ay fiican yihiin, waa marka loo isticmaalo amarka Dib-u-eegista Sifooyinka, xogta ah in boqolleyda ay kor u qaadeen.
2 Sida loo kala saaro
Si ay u kala saaraan, waxaan dooran Xogta xogta> sawireynta mawduuca.
Daaqad ayaa u muuqata, taas oo aad ku habboon tahay in aad u rakibto, dhinaca midigta haddii aad rabto in mawduuca uu noqdo muuqaal kaliya ama lagu kaydiyo lakabka khariidada. Sidoo kale haddii aanu rabno faylka oo dhan, ama a Deedka. Kadibna badhamada bidixda, ku dhufo Add, haddii aan rabno inaan weydiisano su'aalo weydiimaha gaar ahaan.
Waxaan dooran badhanka auto, si aan u muujinno inaan ka fileyno barnaamijka si uu si toos ah u raadiyo qaybaha. Halkaana waxaan dooranaa miiska Tufaax, iyo tiirka Cve_sec, waxaannu tusinaynaa in fasallada ay yihiin kuwo gaar ah, buuxin, midab hoose iyo heerkastoo lakab kasta uu tago. Ka dib markaad sameyneyso Ok, waxaan dooran karnaa mid kale mar kale, sababtoo ah kuwa soo muuqday waa kuwo yar oo fool xun.
Oo wax walbana waa inaad aragto markaad tilmaanto Go, oo guji shaashadda, xarkaha ayaa ku saleysan qaybaha.
3 Sida loo dhigo halyeeyga
Tani waa la qabtaa Settings> Legend, iyo ikhtiyaarka laba dhibcood ayaa lagu doortaa guddiga ama xajmiga ayaa lagu qeexayaa cutubka cabbirka aan shaqaynayno, kiiskan waxaan isticmaali doonaa mitirka 100 100.
Iyada oo Bentley Map, in mawjad kale, laakiin noocyo badan oo badan.
Post Previous«Previous Khilaaf Version Office MobileMapper iyo MobileMapper Office 6
Post Next Horumarinta Codsiyada VBA ee MicrostationNext »
9 Jawaab oo ku saabsan "Sidee loo kala saaraa Microstation Geographics"
Dhibaatada, aragtidayda, waxay tahay in rakibahu musuqmaasuq yahay. Ciladdu waxay abuurtaa; waxaa suurogal ah xoogaa la waafajin kara maktabadda nooca Windows.
Haddii aad ila soo xiriirto adoo adeegsanaya TeamViwer waan ku taageeri karaa.
Tifaftiraha arrinka ee geofumadas.com
Haddii juqraafi la rakibo, waa inaad awood u yeelatid inaad wacdo amar kasta oo keyin ah.
Isku day inaad la xiriirto nadiifinta wadahadalka
Gerald isagu wuxuu leeyahay:
Ma jiro hab kale oo loo raadiyo Qalabka> Joqoraafi ahaan iyo Qalabka> Miiska Nidaamka iskuduwidda kuwaas oo ah kuwa aniga ila muuqda tan iyo markii aan u baahnaa inaan ku nadiifiyo baararka loo yaqaan 'Cleannup topology baararka' laakiin waan baaray oo meelna kama helo ... Waan arki doonaa Runtii waan ku bogaadin lahaa waana ku mahadsan yahay
Waa wax la yaab leh Haddii aad ku rakibi lahayd mashiin kale, ma ahan dhibaato.
Waxyaabaha ku saabsan ilaha dhaqaalaha ma aha dhibaato.
Waxaan caddaynayaa in aan leeyahay daaqadda 7 ee 64 iyo mishiinka kale ee aan ku orday on daaqadda 7 ee 32bits ...
Miyay tahay inay sidaas yeelaan ama ma sidaas oo kale?
Kuwani waa talaabooyinka aan sameeyay :::
1 Ku rakib Install MicroStationV8_2004.
4 Lurgo dhajin Crack ah ee foormaatka loo qoondeeyey
Laakiin waa isku mid laakiin ma arko waxyaalahan ku jira qalabka ...
rakibidda Microstation i toogan fariin qalad CRC ah: File C The: / Program Files (x86) /Bentley/Program/Install/VBA6/release/Windows/Fonts/tahomabd.ttf dosent dhigma file ee setup`s.the dhexe Laga soo bilaabo Adiga oo aad udhaxeeya kuraasta waa la jabin karaa: la xiriir iibiyahaaga software
oo markii aan ku rakibi strip ku Geographic this: Baadi CRC: File C The: / Program Files (x86) /Bentley/Worspace/Projects/Examples/Geospatial/Whistler/dgn/pln/Q18.pln doesn`t dhigma file ee Mudanayaasha 's .cab file. meesha dhexdhexaad ah ee aad ku socoto dhismaha waa la jabin karaa; la xiriir shirkadda software-ka.
Waxaan caddeeyay in khaladaad kuwan la mid ah ay i bixiyeen markii aan ku rakibayo mashiinka kale oo aan si buuxda ugu qancinayo miiska in (... ama ay noqon karto inaad ka heli karto Qalabka> Juquraafi ahaan qayb kale oo ka mid ah barnaamijkaas? Faafinta jawaabtaada)
Waxaa laga yaabaa in si qaldan loo rakibo.
Ma aha inay noqoto dhibaato Windows.
hello this rakibi doonaa GeoGraphics MicroStation laakiin mishiinka Waxaan isticmaali aprece iguma this miiska Tools> Geographics iyo rakibi on computer kale oo aan aprece ikhtiyaarka kaliya ee miinada ee ma ... aad leedahay si aad u aragto haddii aan u sameeyey isku tallaabooyin ku ... waa nooca daaqada ...
Waan jeclahay taas, waa mid ka mid ah hababka ugu quruxda badan, waxaan u heesaa barnaamijkaas